China ibhokisi yebhokisi ephakamileyo yeemithi eqinile ibhedi yokugcina ibhedi # 0111 ukwenziwa kunye nefektri | Yamazonhome
Ibhokisi ephezulu yebhokisi yeenkuni eqinileyo ibhedi yokugcina ibhedi # 0111
Igama: ibhokisi yebhedi
Inombolo yomzekelo: Amac-0111
Ubukhulu: 1500 / 1800mm * 2000 * 800mm
Ibhokisi yebhokisi yeenkuni eziqinileyo
Ifenitshala yesitayile elula, umbala weplanga okhululekileyo kunye nemilo, akukho uyilo lwanamhlanje lungqongqo, akukho milo ingaqhelekanga kunye nokubaxiweyo, vumela abantu balibale isingqisho sokwazisa kunye nokungazinzi, benze ikhaya elifudumeleyo, kwaye bagxile kukonwabela ixesha elisempilweni, lendalo kunye nelikaNordic.
Inkqubo yebhodi epheleleyo yendibano
Ukuhlangana ngokuthe ngqo kwebhodi enkulu kuthetha ukuba kukho ukusika okuthe tyaba kuphela kwaye akukho ukusika kwicala lobude, elenza ukuthungwa kwefanitshala kusike izinto ezintle, izinto eziqinileyo, ubunzima obunzima, kunye nomthamo olungileyo wokuthwala.
Umgangatho oPhezulu oPhezulu oMhlophe waseMelika
I-oki yebanga le-FAS ihambelana nemigaqo yokuhlelwa kwe-NHLA e-United States. Ibanga le-FAS libhekisa kubuchule bokubonelela umphezulu omde ococekileyo, iipateni ezintle, kunye nonobumba obuncinci. Eli nqanaba leenkuni likulungele kakhulu ukwenza ifanitshala. Kwaye ifanitshala eyenziwe yomelele kwaye yomelele, akukho lula ukuqhekeka, ukunxiba okunganyangekiyo nokubola okunganyangekiyo, akukho lula ukuyibumba.
Umgangatho ophezulu womoya womoya + ukhuseleko
Intonga yoxinzelelo lomoya ixhasa ngokulula ibhodi yokuvuka, umatrasi, kunye nokusonga kunye nokothula iimpahla akunangxaki, kwaye ukuvulwa kunye nokuvalwa kuzinzile kwaye kufanelekile. I-headboard yebhedi inokuyilwa ngobubanzi be-85mm, enokusetyenziselwa ukubeka izinto ezincinci ezinje ngeefowuni eziphathwayo. Kuyacingwa kwaye kukhululekile. Zimbini iziseko ezikhuselekileyo kwimingxunya kwibhodi eyintloko, enokusetyenziselwa izibane zasebusuku okanye ukutshaja, efanelekileyo kakhulu kwaye ilungele abantu abangamavila.
Ukutshiza okucocekileyo kwepeyinti yendalo
Imigangatho yepeyinti ingqongqo ngakumbi. Indlela yokutshiza evulekileyo ayinabungozi emzimbeni womntu, inobuhlobo ngakumbi nokusingqongileyo kwaye isempilweni. Imveliso entsha kraca ayinangcamli, kwaye kuphela livumba leenkuni ngokwalo. , Impilo yendalo, akukho kungcoliseka.
Ibhedi eqinileyo yomthi kunye nendawo yokugcina
Emva kokutshiza okulandelanayo oku-4, umphezulu wepeyinti uqinile, kwaye ubonakalisa ubumenyemenye bendalo nobuhle, uvumela ubume, umbala kunye nokuthamba komthi oqinileyo ukuba kuboniswe ngokwendalo. Kwifenitshala elungileyo, iinkcukacha zisisiseko, kwaye zonke iinkcukacha kukubonakaliswa komgangatho.
Uyilo lwekona elijikeleziweyo
Uyilo ithambeka intloko ebhedini ilunga ijika yangasemva ngcono ekusebenziseni, kunciphisa uxinzelelo oluqokelelwe ngasemva ngexesha lomsebenzi, kwaye lwenza ukuxhomekeka ngakumbi. Intloko yebhedi ineekona ezijikeleziweyo zoyilo olunobuhlobo, zonke iikona zinamachaphaza kwaye zikhazimlisiwe, kwaye imveliso ikhuselekile Ukuphucula, makhe ulale uzolile.
Indawo enkulu yokugcina + uxhulumaniso lwekhwalithi ephezulu yehardware
Indawo enkulu yokugcina inokuthi ithelekiswe neyesibini ikhabethe kwigumbi lokulala. Xa kuthelekiswa neebhedi eziqhelekileyo, ibhokisi yebhokisi inesibonelelo somthamo omkhulu. Unokubeka iiquilts ezininzi kunye neempahla zasebusika ngokuthanda, kwaye indawo iyasebenza kwaye igcina indawo yasekhaya. Umsebenzi wobugcisa, uqhagamshelo lwehardware ekumgangatho ophezulu, oluzinzileyo noluthembekileyo ngaphandle kokugungqa okanye ukungcangcazela, kunye nolwakhiwo olusengqiqweni nolomeleleyo
Iibhodi zebhedi yeenkuni eziqinileyo zilungiswe kakuhle
Ibhodi yebhedi yenziwe ngomthi weplanga ekumgangatho ophezulu, kwaye iinkuni zepine zisikwa ngokuthe ngqo kwaye zisikiwe ngaphandle kokulungiswa kwesibini kunye nokupeyinta. Inobuhlobo kwindalo kwaye isempilweni, kwaye umbala weenkuni kunye nevumba elimnandi ligcwele umtsalane wendalo. Ibhodi nganye yebhedi icwangciswe ngokusondeleyo nangokucocekileyo ngokudibeneyo, eyenza ukuba umthamo wokuthwala womelele, kwaye kulula ukutsiba kwaye udlale kuyo.
Egqithileyo I-Gymnastics Air Mat 2m 3m 4m yobungcali yokulandelela umoya wendlela yeYoga Umlo wokulwa iphedi ukuthintela ukwenzakala kokuwa kweemethi 0388
Okulandelayo: Ihowuliseyili inflatable yoga mat ixabiso kwezemidlalo air track Gymnastics Tumbling Mat Air Floor 0393
Itheyibhile esongwayo yebhedi kunye neTafile yoFundo elula F ...
Igumbi lokuHlala eliQinisekileyo leNordic laMagumbi amabini eMibala ...
Ibhedi elula Windsor Wood okulala Wood Bed Princ ...
Isimilo esimbaxa esimbaxa sesofa esenziwe ngokuqinileyo sePlanga # 0028